Ukunyamekelwa kweKitefish | Ngeentlanzi
El intlanzi yekayiti ivela kwilizwekazi laseMelika kwaye ube yinxalenye yosapho yentlanzi yegolide okanye ikwabizwa Goldfish. Ikhometi okanye intlanzi yesarasa inomzimba omde kwaye inomsila omnye. Ngaba kunjalo ngokufanayo neentlobo eziqhelekileyo ngumahluko wokuba umzimba uphezulu, ubukeka kwaye unamaphiko aphuhlileyo.
Zifumaneka kwiithoni ezimhlophe, ezesilivere, ezimthubi nobomvu, kwaye yenye yezona ntlobo zidumileyo njengoko yenye yeentlanzi ezilungileyo ukuzivumelanisa nazo zonke iimeko. Ukuba inkathalo ilungile, ezi khayithi zihlala zihlala phakathi kweminyaka esixhenxe kunye neshumi elinesine kwaye zihlala zifikelela kwiisentimitha ezingama-20, ngaphandle kokubala umsila.
yakhe iintlanzi zamanzi abandayo, kwaye ukuze isinde ngokuchanekileyo kufuneka ingathathi cala okanye i-alkaline encinci, malunga ne-16 ° yeqondo lobushushu. I-Kitefish yenye yeefayile ze- iintlobo ezingcolisa kakhulu kwaye bangcolisa amanzi kwi-aquarium, ke kubalulekile ukuba ihlale icocekile.
Ukuba uthatha isigqibo kolu hlobo lwentlanzi ukuze ungene kwi-aquarium, kubalulekile ukuba wazi ukuba bayintlanzi abasithandi isizungu kwaphela, ekufuneka ubandakanye intlanzi encedisayo ngakumbi phakathi kwazo, ubukhulu becala ezinye iintlobo zentlanzi yegolide. Ewe akufuneki ubadibanise neentlanzi zetropiki, kuba iimfuno zasemanzini zamva azifani kwaye neentlanzi ezidada kancinci kunazo.
Iintlanzi zekhayiti idinga indawo eninzi yokuhamba ngokulula Kuyo yonke i-aquarium, ekufuneka inyuswe. Ziyasebenza kakhulu, ezenza ukuba ngamanye amaxesha zithande ukutsiba emanzini, ke kuyacetyiswa ukuba ubeke isiciko kwi-aquarium.
Ukuze zikhathalelwe ngokufanelekileyo, babonelele ngeoksijini eyimfuneko impilo yakho efanelekileyo. Ukwenza oku, kufuneka kuqinisekiswe ukuba i-aquarium ineelitha ezingama-40 zentlanzi nganye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Amanzi abandayo e-aquarium » Unonophelo lweKitefish